Ukutholwa Kokuhola Kwedijithali Kuguquka Kanjani Martech Zone
Ukutholwa Kokuhola Kwedijithali Kuguquka Kanjani
NgoMsombuluko, Okthoba 24, 2016 NgoMsombuluko, Okthoba 24, 2016 UMuhammad Yasin
Ukutholwa komthofu bekukhona isikhashana. Empeleni, mangaki amabhizinisi akwazi ukuphatha i-GET ibhizinisi. Abathengi bavakashela iwebhusayithi yakho, bagcwalisa ifomu bafuna imininingwane, wena uqoqa leyo mininingwane bese uyababiza. Kulula, akunjalo? Ehh… hhayi njengoba ucabanga.
Umqondo, ngokwawo, ulula ngobuhlanya. Ngokwethiyori, kufanele kube lula kakhulu ukubamba imikhondo eminingi kangaka. Ngeshwa, akunjalo. Yize bekungahle kube lula eminyakeni eyishumi eyedlule, abathengi sebenokwesaba okukhulu ngokuyeka imininingwane yabo. Ukucabanga ukuthi (umthengi) uzofaka imininingwane yakhe efomini (ngenhloso yokuthola ulwazi) futhi bazohlaselwa ngezingcingo, ama-imeyili, imibhalo, i-imeyili eqondile njalonjalo. Yize lokhu kungenjalo kuwo wonke amabhizinisi, abanye banakho futhi bazohlasela amathemba ngalezi zinhlinzeko - futhi kuyacasula kakhulu.
Uma kushiwo lokho, abathengi abambalwa nabambalwa bagcwalisa amafomu wokuhola we-static.
Manje, uma ngithi amafomu e-static lead, ngisho amafomu amafushane anezikhala ezingaba ngu-4-5 zemininingwane yakho yokuxhumana (igama, inombolo yocingo, i-imeyili, ikheli, njll.) Futhi mhlawumbe isigaba samazwana sokubuza umbuzo osheshayo noma ukuhlinzeka impendulo. Amafomu awavamile ukuthatha isikhala sendawo ekhasini (ngakho-ke awabukeki), kepha awanikezi lutho olunenani elibonakalayo kumthengi noma.
Ezimweni eziningi, abathengi bagcwalisa imininingwane yabo ukuze bakwazi ukuthola imininingwane eyengeziwe (kusuka kubhizinisi) ngokuhamba kwesikhathi. Ngenkathi kungekho lutho olungahambi kahle ngalesi simo, imininingwane eyengeziwe izicelo zabathengi zigcina ziphenduke indawo yokuthengisa. Noma umthengi ethola imininingwane ayicelile, kungenzeka angafuni ukuthengiselwa okwamanje - ikakhulukazi uma besesigabeni socwaningo.
Amafomu ohlobo oluholayo lwe-Static asekhona, kepha asheshe afe ukuze enze izindlela zezindlela eziningi eziguqukayo zokukhiqizwa kwedijithali. Amafomu okukhiqiza abaholi (noma amapulatifomu kunalokho) aba sebushelelezi futhi athuthuke kakhulu ukubhekela izidingo nezidingo zabathengi - okunikeza abathengi isizathu sokunikeza lelo bhizinisi imininingwane yabo. Nakhu ukuthi ukuhola kokuhola kwedijithali kuguquka:
Amafomu we-Lead Gen Ayaqala “Ukuhlanganyela” futhi “Azibandakanya”
Amafomu okuhola aqinile ayilokho nje: Static. Abakhangi; futhi ngokungagwegwesi, ziyizidina. Uma kubukeka kuyisicefe (noma okubi kakhulu, akubukeki kusemthethweni), amathuba okuba abathengi bagcwalise imininingwane yabo mancane. Akukhona nje ukuthi abathengi bafuna ukucabanga ukuthi kukhona okupholile noma okujabulisayo okuzayo (futhi uma konke kukhanya futhi kucwebezela, kungahle kube nje), bafuna ukuqinisekisa ukuthi imininingwane yabo ayithengiswa kumaqembu wesithathu noma isetshenziswa ngokungemthetho. Bafuna ukwazi ukuthi imininingwane iya kubani abathi iya kubo.
Enye yezinto ezinkulu kakhulu ezenzekayo ukuhola amafomu ukuthi ziba lula, kusebenzelana kakhudlwana futhi kuheha kakhudlwana.
Esikhundleni sefomu elicela imininingwane elula yokuxhumana, kubuzwa imibuzo eminingi - nokuvikela isithukuthezi, le mibuzo yethulwa ngezindlela ezihlukile.
Amabhizinisi amaningi aseqalile ukusebenzisa amamenyu okudonsela phansi, ukukhetha okuningi, nokugcwalisa umbhalo uqobo ukuqinisekisa ukuthi umthengi uhlala ebanaka. Ngokwengeziwe, amafomu okuhola manje enza kube ngokwezifiso kakhulu, futhi amabhizinisi manje ayakwazi ukubuza imibuzo engaba nentshisekelo kumthengi. Esikhundleni sokuzwa njengokufaka isicelo, le fomethi esanda kuguqulwa izwa njengokugcwalisa iphrofayli - engathunyelwa kumthengisi ongabasiza kunokubathengisela yona.
Abathengi Banikezwa Inani Langempela
Uma ubuyela emuva ngeminyaka engaphansi kwemihlanu, uzokhumbula ukuthi iningi lokugcwaliswa kwamafomu bekuyizindlela nje zokucela ulwazi oluthe xaxa. Ungafaka imininingwane yakho yokuxhumana, mhlawumbe imininingwane ethile oyikhethayo, uzoshaya uhambise bese ulinda othile ukuthi axhumane nawe. Kwesinye isikhathi ungabhalisela i-newsletter yanyanga zonke noma into efanayo - kepha empeleni, akukho okubalulekile.
Shesha kakhulu leyo minyaka emihlanu, futhi manje sesithola ukuthi kanye namafomu e-static ayahamba, ukugcwalisa amafomu okuhola sekuyinto yokushintshana kakhulu. Esikhundleni sokuthola impendulo efana nokuthi “Ngiyabonga ngokuthumela ifomu lakho. Othile uzolula isandla kungekudala, ”abathengi baphathwa khona manjalo ngokunikezwa komkhiqizo / kokunikezwa kwensizakalo, izaphulelo, futhi ezimweni eziningi njengokufika kwesikhathi, imiphumela yokuhlola!
Enye yezinto ezintsha izivakashi zewebhusayithi ezibheke phambili kuzo ukuthatha imibuzo nokugcwalisa ukuhlolwa.
Isibonelo esihle salokhu kungaba ukuthi “Uhlobo luni lwemoto olukufanele?” ukuhlolwa. Lolu uhlobo lokuhlola ebesingazibona silunikeza amakhasimende ethu ezimoto ngenhloso yokuthi ukukhiqiza ukuhola kwezimoto ezintsha. Kulokhu kuhlolwa, umthengi uphendula imibuzo ethile ngokuthanda kwakhe / ukushayela okuthandayo. Lapho sebethumele izimpendulo zabo, imiphumela yabo iyakhiwa ngokushesha. Ukuze benze lokhu, kunjalo, badinga ukuhlinzeka ngemininingwane yabo yokuxhumana. Uma umthengi efuna ukwazi ngokwanele (futhi siyethemba ukuthi bayikho), bazofaka i-imeyili yabo, futhi bazothola imiphumela yabo.
Esikhundleni sesimo sokunikeza nokuthatha, amafomu okuhola asebenzisana ngokwengeziwe; okwenza ukushintshisana okulinganayo phakathi komthengi nebhizinisi.
Uma umthengi egcwalisa “Iyiphi imoto ekufanele?” Ukuhlola futhi bathi banomndeni omkhulu, bangathola ivawusha yokuhlola ukushayela imoto ethile. Noma, okungcono kakhulu, bangathola ukunikezwa okusheshayo kwe- $ 500 emotweni yomndeni. Uma kuziwa ekunikezeni inani kubathengi, amathuba cishe awapheli.
Ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe ngokushesha okukhulu, abahlinzeki bamafomu abaholayo abaningi bangaluthatha ngokuzenzakalela ulwazi abathengi abalungena kwifomu lokuhola bese beluguqula lube ngumnikelo ohambelana kakhulu nomthengi. Amafomu okuhola awasafani nalokho ayeyikho ngaphambili. Baguqukele kokunye okukhulu kakhulu kunalokho abathengisi abaningi ababengakucabanga. Njengoba ubuchwepheshe bokuthwebula bokuhola buqhubeka nokwenza ngcono futhi buguquke, imikhiqizo idinga ukuguqula inqubo yabo yokubamba phambili!
Tags: ukuhlolwa kwabathengiukuhola komthengidigital lead bambaokuqukethwe okusebenzisanayookuhlangenwe nakho okusebenzisanayoukusebenzisana okuhola phambiliukutholwa kokuhola kwe-inthanethiukuhola phambili
Ingabe Amafomu Okuhola Afile?